WARBIXIN: Shan Arrimood Oo Aan Xalkooda La Haynin Oo Sabab U Ah Mushkiladda Barcelona Iyo Madax-xanuunka Sugaya Quique Setien | Laacib.net
WARBIXIN: Shan Arrimood Oo Aan Xalkooda La Haynin Oo Sabab U Ah Mushkiladda Barcelona Iyo Madax-xanuunka Sugaya Quique Setien
January 27, 2020 Abdiwahab Ahmed Comments Off on WARBIXIN: Shan Arrimood Oo Aan Xalkooda La Haynin Oo Sabab U Ah Mushkiladda Barcelona Iyo Madax-xanuunka Sugaya Quique Setien
Labadii ciyaarood ee ugu horreeyey waayaha tababare Quique Setien, Barcelona waxay kusoo badisay si dhib badan, waxaana kulankii hore ee Granada hal gool oo kali ah u dhaliyey Lionel Messi xilli ay ciyaartu u dhoweyd barbarro. Kulankii labaad oo ay u tageen Ibiza, Antoine Griezmann ayaa is canaantay oo laba gool u saxeexay halka iyagana mid laga dhaliyey. Labadan kulanba waxay guusha ku heleen min hal gool oo ay kooxda kale dheeraayeen.
Ciyaartii saddexaad, waxay noqotay bilowga guul-darrooyinka tababaraha cusub, waxaana 2-0 ku garaacday Valencia, waxaana ciyaartan la diiwaangeliyey dhacdooyin niyad-jab leh oo la xidhiidhay bandhigga Barcelona.
90-kii daqiiqadood ee ay ciyaartu socotay, Barcelona saddex jeer oo kaliya ayay goolka toogatay, mid ka mid ah ayaana bartilmaameedkiisii abbaaray inkasta oo aanu dhalanin. Saddexdan marba waxa kubadda laagay Lionel Messi.
Waxa intaa sii dheerayd, in saddexda laagba uu bannaanka diilinta kasoo tuuray oo wax fursad ah aanu ka dhex helin difaaca oo laga ilaaliyey inuu gudaha soo galo.
Marka uu Messi intan samaynayey, ciyaartoyga kale waxay garan la’aayeen si ay wax yidhaahdaan, iyadoo meelaha liitay ay ka mid ahayd khadka dhexe iyo difaaca oo fursado badan hadiyad uga dhigay Valencia.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan arrimood oo wali xal loo haynin oo ah kuwii sababsaday tababarihii hore ee Ernesto Valverde, haddana noqonaya caqabadda madax xanuunka ku ah Quique Setien.
1. Buuxinta booskii Suarez
Luis Suarez waxa uu gebi ahaanba ka maqnaan doonaa inta ka hadhay xili ciyaareedkan kaddib dhaawac soo gaadhay, waxaana wali ay kooxdu raadinaysaa beddelkiisa iyadoo uu waqtiga suuquna gabaabsi yahay oo uu Jimcaha soo xidhmayo.
Lionel Messi oo 14 gool dhaliyey, waxa gacan weyn siiyey Suarez oo culayska difaaca ka ridi jiray, isla markaana kubbadaha qaarkood caawiye uga noqday. Sidoo kale, Suarez waxa uu soo dhaliyey 11 gool oo horyaalka ah.
Gool-dhalinta Barcelona ee xili-ciyaareedkan, waxa hoggaaminaya Messi, waxase fashil ah Griezmann oo aan wali si buuxda ula qabsanin kooxda, hase yeeshee toddoba gool soo saxeexay.
Ciyaartoyga Barcelona usoo dhaliyey goolasha iyo tiradooda:
Lionel Messi: 14 goalsLuis Suarez: 11 goals
Antoine Griezmann: 7 goals
Arturo Vidal: 6 goals
Arthur Melo: 2 goals
Sergio Busquets: 1 goal
Frenkie de Jong: 1 goal
Carles Perez: 1 goal
Ousmane Dembele: 1 goal
Junior Firpo: 1 goal
Clement Lenglet: 1 goal
Gerard Pique: 1 goal
2. Difaacyada dhexe
Cidina ma dafiri karto in Barcelona aanay haysanin laba ciyaartoy oo fiican oo difaaca dhexe ah. Gerard Pique ayaa u muuqda in tamartiisu soo yaraanayso, waxaanu samaynayaa qaladaad badan oo sabab u noqday in goolal laga dhaliyo kooxdiisa.
Samuel Umtiti oo kasoo kabanaya dhaawac halis ahaa ayaan wali helin qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa, waxaana muuqata inuu luminayo aragtidii marka hore u muuqatay Barcelona ee ay kusoo iibsatay.
Clement Lenglet ayay isagana fartu ku godan tahay, waxaana lagu eedaynayaa in ciyaarihiisii ugu dambeeyey aanay ahayn kuwii looga bartay.
3.Dhibaatooyinka garabka Midig
Sergi Roberto oo kasoo baxay kulliyadda Mestalla ee Barcelona, waxa uu qaban karaa difaac dhexe haddii laga maarmi waayo, laakiin inta badan waxa uu ahaa ciyaartoy ka dheela difaaca midig, halka booskiisa saxda ahna uu yahay khadka dhexe.
Booskaas waxa tababareyaashii kala dambeeyey ay ka doonayaan ciyaartoy marna hore u gala weerarka marna dib ugu soo noqda difaaca oo caawiya, waxaana taas hoos uga soo dhacay Sergi Roberto oo u muuqda in uu u baahan yahay in khadkiisii dhexe lagu celiyo.
Ansu Fati ayaa kulankii ugu dambeeyey ee Valencia ka dheelay garabka weerarka ee midigta, waxase uu samayn waayey shaqooyinkii difaac ee looga baahnaa marka ay kubaddu kooxda kale lugta u gasho, waxaana halkaas iska maamulanayey Jose Gaya.
4. Mashqnaanshaha masuuliyaddii weerarka
Kulan kasta, Barcelona waxay guusha ka sugtaa hal ciyaartoy oo ah Lionel Messi oo noqday xalliyaha dhibaatadooda, laakiin culayska badan ee garbihiisa la saaray mar walba suurtogal maaha inuu shaqadaas si habboon u guto. Arthur Melo ayaa Sabtidii isku dayey inuu qaato masuuliyadda Messi oo kale, wayse u suurtoobi weyday.
Taatikadii tababarihii shaqada laga caydhiyey ee Ernesto Valverde, ayaa waxay hayd in gebi ahaanba ay kooxdu ku tiirsanaato xiddiga reer Argentine oo maalin walba uu ka dooni jiray inuu goolal u dhaliyo, laakiin kooxaha kasoo horjeeda way ogyihiin inuu Messi uu yahay khatarta ugu weyn, waxaanay saaraan culays mararka qaarkood sababta inay qabtaan.
Tababaraha cusub ee Setien oo laga sugayo inuu mushkiladdan xal u helo, waxa uu isku dayayaa inuu wadar-ahaan kooxda ugu carbiyo inay weerarka u qaaddo oo goolal usoo dhaliso, balse xaqiiqada ah in Messi, Vidal iyo Griezmann mooyaane aanay laacibiinta kale ee kooxdu dhalinin wax ka badan min laba gool ayaa ah carqaladda jirta.
5. Qaab-ciyaareedka tababare Setien iyo Vidal oo aan isku habboonayn
Tababaraha reer Spain waxa uu doorbidaa in ciyaaryahannada khadka dhexe ay in badan kubadda lugtooda ku hayaan, waana sida ay sameeyaan Arthur, Sergio Busquets iyo Frenkie de Jong. Tani waxay keenaysaa in tayada Arturo Vidal ee ah in kubadda hore loo dhaqaajiyo, la jiido oo aan badan la haysanin ay iska hor yimaaddaan.
Si kastaba, shantan arrimood ayaa laga sugayaa in tababare Quique Setien uu xalliyo, haddii kale, kooxdu hoos ayay usii degi doontaa, waxaana ka faa’iidaysan doonta Real Madrid oo haddaba saddex dhibcood ka sarraysa.